Yiya Kukhulu ngesiCwangciso esiCwangcisiweyo se-imeyile ukuqhuba i-Sky-High ROI | Martech Zone
Yiya kuKhulu ngesicwangciso esiCwangcisiweyo se-imeyile ukuqhuba i-Sky-High ROI
NgoLwesithathu, Julayi 29, 2015 NgoLwesithathu, Julayi 29, 2015 UFayez Mohamood
Ii-imeyile ezichukunyisiweyo ziyindlela elungileyo yokubandakanya abathengi kunye nokuqhuba ukuthengisa, kodwa ukuqonda okungachanekanga malunga nokuba yintoni ebangela ukuqala kunye nendlela yokuphumeza ukubagcina abanye abathengisi bangasebenzisi ngokupheleleyo iqhinga.
Yintoni i-imeyile ekhutshiweyo?
Kwinqanaba layo elisisiseko, i-trigger iyimpendulo ezenzekelayo, njengombuliso wokuzalwa owenziwe ngokuzenzekelayo ovela kuGoogle. Oku kukhokelela ekubeni abanye bakholelwe ukuba ii-imeyile ezingasetyenziswayo zinokusetyenziswa kuphela kwiimeko ezinqongopheleyo. Kodwa enyanisweni, uluhlu lweziganeko ezibangela, idatha kunye nezenzo ziphantse zangumda.
Endaweni yokuwela kumgibe wokucinga okuncinci xa kuziwa kubangela, abathengisi endaweni yoko mabacinge ngezinto ezinokubangela nasiphi na isizathu sokubuyisela umva kunye nokugcina umthengi. Kwiinkampani ezisebenzisa ii-imeyile okwangoku, ukusebenzisana kweenqwelo zokuthenga zizinto eziqhelekileyo. Umthengi unokubeka izinto ezininzi kwinqwelo yakhe emva koko ayishiye indawo leyo. Inkampani isebenzisa le datha njengokubangela, ukuthumela umthengi isikhumbuzi se-imeyile malunga nezinto ezikwinqwelo yokwandisa amava okuthenga kwaye ekugqibeleni uqhube ukuguqulwa.
Izinto ezibangelwe zihambelana Ukulahlwa kwinqwelo othengela kuyo ziyindlela eqinisekisiweyo yokuqhuba ingeniso ngokubuyisa ingqalelo yabathengi. Kodwa ngayo yonke into ekugxilwe kuyo namhlanje kwiphulo kubahlalutyi kunye nedatha yabathengi njengezinto eziphambili eziqhuba uguquko, kunokuba lula kubathengisi ukuba balahle eminye imithombo yedatha ebalulekileyo kumbutho, ezinje ngeekhathalogu zemveliso kunye notshintsho lwamaxabiso.
Xa abathengisi bachaza ukubangela ukubanzi ngokubanzi njengethuba lokunxibelelana nabathengi ngokusekwe kukuziphatha kwabathengi kunye notshintsho kwikhathalogu yemveliso, banokuqala ngokujonga idatha yenkampani ezinje ngokutshintsha kwexabiso kunye neendawo zokulahla abathengi ezibangelwa zizaziso zangaphandle kwesitokhwe njengethuba lokwakha iphulo lokuqalisa. Inyathelo elilandelayo kukuseta okubangela kunye nokuvavanya ukuba yeyiphi indawo ekuchukumiseka eqhuba ezona zivulekileyo, ucofa kunye namaxabiso okuguqula.
Umzekelo, iinkampani zinokunyusa idatha yabathengi ukwakha amaphulo aqala ngokujikeleza kwezinto ezahlukeneyo, kubandakanya ukukhangela, udidi kunye nephepha lemveliso. Ukulahla ngakunye lithuba lokufunda kule ndlela yokuziphatha kunye nokubangela ukuba i-imeyile ebhalwe igama lakho ibalaselise iimveliso kunye nokunikezelwa okunxulumene naloo shopper. Elinye iqhinga elisebenzayo kukuqalisa i-imeyile malunga neemveliso ezithile, njengokuhla kwexabiso okanye uluhlu olusezantsi.
Abathengisi banokuvavanya izibonelelo ezizodwa ukuze babone ukuba yintoni eqhuba eyona ROI iphezulu. Umzekelo, iphulo lokuqalisa elikhumbuza umboleki malunga nezinto ezishiyiweyo zenqwelo yokuthenga zinokuyithambisa imicimbi ngokuhambisa simahla. Abathengisi banokuvavanya iimeko ezahlukeneyo ukumisela ukuba yeyiphi indlela efanelekileyo ehambelana nokuthengisa kunye neenjongo zengeniso.
Kwixesha elidlulileyo, ukufumanisa amanqaku okuchukumisa kunye nokusebenzisa amaphulo okuqala kwakudla ixesha kwaye kubiza. Kodwa ngezisombululo zangaphambili ze-ecommerce ezikhoyo ezikhoyo, abathengisi banokuphehlelela ngeentsuku, hayi iinyanga kwaye bathumele okubangela ngexesha lokwenyani. Ngelixa kusenziwa amaphulo e-imeyile abathengisi banakho, kwaye kufanele, uvavanyo lwe-A / B lubangele imigca yezihloko kunye noyilo lokuqinisekisa ukuba izibonelelo ezifanelekileyo zithunyelwa ngexesha elifanelekileyo kubathengi abafanelekileyo.
Abathengisi abasebenzisa uvavanyo lwe-A / B ukufumana isibonelelo esifanelekileyo banokuvuna umvuzo obaluleke kakhulu. Kwimeko enye, uphawu lufunyenwe olunikezela ba thengisi zaye I-300% isebenze ngakumbi Ngaphandle kwezithembiso ezinabantu “abafikayo” Idatha enje inceda abathengisi ukuba bonyuse imbuyekezo kwiphulo, njengokusetyenziswa kweendlela ezinje ngokubandakanya igama lemveliso kumgca wesifundo se-imeyile, esenza amaxesha ali-10 asebenze ngokufanelekileyo.
Abathengisi namhlanje banokhetho oluninzi ngakumbi ngenxa yedatha enkulu kunye nezisombululo eziphambili ze-ecommerce. Abo bafuna ukufumana umda wokhuphiswano kufuneka bacinge ngokubanzi malunga nemikhankaso yokubangela kunokuba baziphose nje ngesicwangciso esiliqili se-imeyile yenkampani. Ngendlela esekwe kubasebenzisi benkxaso kunye nedatha yekhathalogu yemveliso ukuqhuba unxibelelwano olufanelekileyo nolufike ngexesha elifanelekileyo, abathengisi bangaqala ukuqhuba ngokunyuka okukhulu.
tags: I-ecommerce ibangelweecommerce ibangele i-imeyilegerekubangele ii-imeyile
UFayez Mohamood sisiseko kunye ne-CEO ye IBluecore, Ukwenza ukuba abathengisi be-eCommerce benze kwaye basasaze ii-imeyile ezenziwe ngabantu ezinesantya kunye nokuchaneka okungenakwenzeka ngaphambili, ukuphendula ngamandla kwindlela yokuziphatha kwabathengi kunye notshintsho kwikhathalogu ngemizuzwana. Ngamaqabane angaphezu kwama-70 amele ngaphezulu kwe-100 yeemveliso zabathengi. IBluecore sesinye seziqalo ezikhula ngokukhawuleza kwiSixeko saseNew York, kutshanje sokuvala uthotho lweenxa zonke olukhokelwa yiFirstMark Capital.
Ummakishi wakho ukhona ukukunceda
Iziphumo zoHambo lweSixhobo esiNqamlezileyo kunye noLwenziwo lweXesha leNene